Chikunguru 9, 2018 arun
New tsvakurudzo bepa anoona Bitcoin sezvo zvikuru nzira mubhadharo mukati 10 makore
Bitcoin uye cryptocurrency vakagamuchira rutsigiro kubva vaongorori pana Imperial College London, vanoti digitaalinen dzeEurope dziri primed kuti vakawanda kuitwa.
Maererano bepa vanoda “Cryptocurrencies: Kukunda Zvinotadzisa Trust uye wokugamuchirwa” Bitcoin uye cryptocurrencies vachava yakarova choruzhinji senzira kubhadhara zvinhu uye mabasa mumakore gumi.
The matatu nzira vaongorori wakaradzikwa kuitwa sezvo mari dziri:
Store chinokosha: kubvumira vanhu kuti intemporal sarudzo musi kana kupedza rokutenga simba ravo
Medium zvokutsinhanisa: pakugonesa exchange kwenhumbi uye mabasa kupfurikidza Achabvisa inefficiencies kusonganirana ita mutengano upfumi
Unit penhoroondo: kuita chiyereso unokosha muna zvoupfumi
Maererano bepa “uchisangana okupedzisira zviviri zvinodiwa zvinoda Bitcoin nezvimwe cryptocurrencies mberi kuramba nematambudziko akadai scalability, magadzirirwo murau.”
Binance donates $ 1M zvemadhenari crypto kuJapan kuti vawirwa nemafashamo
Achipindura njodzi ekunze kuti zvikuru ukama West Japan maawa mashomanana apfuura, Changpeng Zhao, ari CEO pamusoro Binance tsitsi ake Twitter mumhanyi. The pambiru vakazivisawo kuti kambani yake achaita mari kuti akaenzana kukosha $1 mamiriyoni zvinotevera mari: BTC, BNB kana JPY.
"Mwoyo yedu kubuda vakawirwa West Japan. @binance uchatanga aine $1,000,000 USD yakaenzana mupiro kana BNB, BTC, kana JPY. Tinoratidzawo kubvunza yedu crypto ishamwari kubatana nesu uye kubatsira shamwari dzedu vanoshaya. "
Kraken Daily Market Mushumo 08.07.2018
$85.6M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
"Bitcoin kuwanazve MASSIVELY,...
ALL 2019 BITCOIN INVESTORS NEED TO WATCH THIS VIDEO: chido 2019 REALLY BE The BEST YEAR FOR BTC EVER?